तिथि मेरो पत्रु » म कुनै तरिका हेर्नुहोस् – अब के?
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अप्रिल. 06 2020 |5मिनेट पढ्न
त्यसैले, तपाईं डेटिङ साइटहरु को एक जोडी साइन अप छु र वास्तवमा चाहन्छु केही मानिसहरूले असल चिन्न पाएको छु… शायद यो पनि मिति. तपाईं अब के गर्छन्?
खैर, तपाईं आफ्नो प्रोफाइल सहे र कसैले तपाईंलाई सम्पर्क गर्न लागि प्रतीक्षा गर्न सक्छन्, तपाईं आफै अग्रसर तर यदि तपाईं शायद धेरै राम्रो परिणाम प्राप्त. तपाईं रोचक कसैले पाउन र भन्न चाहनाको महसुस गर्दा “अरे”, विनीत हुन छैन! त्यो व्यक्ति सुन्न प्रेम सक्छ. आखिर, तिनीहरूले एक प्रोफाइल सिर्जना, तपाईं जस्तै, बैठक कुनै को आशा मा. तिमी निश्चित तपाईं तिनीहरूलाई सम्पर्क र पत्ता सम्म थाहा छैन.
महिलाहरु, लजालु हुन छैन – मानिसहरू अवलम्वन गर्न प्रेम!
तपाईं सम्पर्क प्रारम्भ कसरी?
कसैले सम्पर्क गर्न सबै भन्दा साधारण तरिका एक इमेल संग छ, एक पल सन्देश, या 'संकेत'.
यो के तपाईं भन्न र अन्य व्यक्ति को लागि एक महसूस प्राप्त गर्न जाँदैछन् के सोच्न धेरै समय दिन्छ किनभने तपाईं केही इमेल आदानप्रदान नभएसम्म म तत्काल सन्देश बचत सिफारिस गर्दछौं. तपाईं प्रत्येक अन्य संग बढी परिचित एक पल्ट, त्यसपछि तपाईं कुराहरु शुरू गर्न सक्छन्.
तपाईं भुक्तान सदस्यता छैन भने, तपाईं सबै भन्दा अधिक संभावना 'Winks प्रयोग गर्न सीमित हुने छौं’ वा 'मुस्कान’ वा यस्तै कुरा. यी भन्न हुनेछ कि डिब्बाबंद सन्देश हो “न्यान्सी तपाईं मा रुचि छ” वा “जो तपाईं मा winked”. Winks र मुस्कान नमस्ते भन्न तर आमूल कसैको चासो pique आफ्नो क्षमता सीमित गर्न छिटो तरिका हो. यो तपाईं को लागि आफ्नो कुरा गरेर सबै गर्न हुनेछ किनभने यो एक भयानक प्रोफाइल भएको मा दबाव को एक धेरै हाल्छ.
इमेल सुरुमा सबै भन्दा राम्रो छ.
एक संभावित मिति इमेल धेरै प्रेमलीला जस्तै छ. पहिलो इमेल उद्देश्य तिनीहरूलाई प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न छ, एक संवाद खोल्न. तपाईं आफ्नो चासो प्राप्त तर तपाईं फिर्ता तिनीहरूले प्रतिक्रिया हुनेछ भनेर यो समाप्त खुला छोड्न चाहनुहुन्छ. छोटो र आकर्षक आफ्नो इमेल राख्नुहोस्. अर्को टिप: एक व्यक्ति इमेल को एक बौछार पठाउन छैन, आफ्नो गति पछ्याउन र माथि पालन गर्ने प्रयास. (तिनीहरूले पठाउन भने4एक हप्ता, तपाईं पठाउन4या त एक हप्ता।)
त्यसैले तपाईं त्यो पहिलो इमेल लेख्ने कसरी?
व्यक्तिगत विज्ञापन गर्न जवाफ जब, हुन प्रयास, राम्रो, सुन्दर. कम्तीमा एक आफैलाई बारेमा अनुच्छेद वा दुई र के तपाईं तिनीहरूलाई वा आफ्नो व्यक्तिगत विज्ञापन बारे मा रुचि लेख्नुहोस्. प्रोफाइल लेखन को सिद्धान्त थुप्रै इमेल लागू, यस्तो सकारात्मक रहन को रूप, इमानदार हुने, र हिज्जे र व्याकरण गहिरिएर.
अनलाइन कसैले बैठक धेरै रमाइलो हुन्छ र प्रेम किशोरी प्रहार जस्तै महसुस गर्न सक्छन्, तर एक जस्तै लाग्न छैन आफ्नो सबै भन्दा राम्रो गर्न. हामीमध्ये अलि धेरै परिपक्व छ भन्ने कसैलाई खोजिरहेको छन्, एक जीवनकालमा साथी भएकोमा क्षमता छ भनेर कसैले. तपाईं पहिलो एक व्यक्ति संग संवाद सुरु गर्दा, चोंचला खराबी छ, खुसी हुनुको, र ख्यालठट्टा, तर निश्चित यो शीर्ष मा छैन बनाउन. साथै, आफ्नो प्राण खन्याएर सुरु छैन, आफ्नो पूर्व-पति या पूर्व-अन्य महत्वपूर्ण बारेमा तिनलाई सबै बताउन. यस्तो आर्थिक समस्या व्यक्तिगत कुराहरू कुरा जोगिने, स्वास्थ्य समस्याहरूको, वा आफ्नो बेकारी परिवार बारेमा कथाहरू. यो एक विशाल turnoff छ, र एक उत्कृष्ट तरिका दूर कसैले तर्साउन. यो कपाल काट्ने मा आफ्नो बिहीबार रात पोकर खेल या दिन को लागि भाषणको कि प्रकारको बचत. तपाईं एक्ली आमा हुनुहुन्छ भने, आफ्नो बच्चाहरु कुराकानी को एक सानो बिट बरफ तोड र साधारण भूमि पाउन राम्रो छ, तर तपाईं रोमान्टिक सम्बन्ध बनाउन खोजेको सम्झना, यसैले पनि एक न्यूनतम राख्न.
सधैं इमानदार हुन!
सम्बन्ध अघि बढोस् भने, सत्य अन्ततः बाहिर आउनेछ. यो माथि आफैलाई हुन सामने भन्दा शुरुवात मा एक मूर्ख झूट बताउन उत्तम छ, मात्र बाहिर पाइने र एक संभावित सम्बन्ध वाहेक गिरावट छ गर्न.
सकारात्मक यो राख्नुहोस्!
कुनै चाहनुहुन्छ अन्तिम कुरा कसैले गर्न र प्रतिक्रिया मा एक सन्देश पठाउन छ, आफ्नो पछिल्लो सम्बन्ध असफल सबै कुरा सुन्न, स्वास्थ्य समस्या, वा वित्तीय संकट. तपाईं प्रत्येक अन्य एक सानो बिट चिन्न पछि तपाईं विनाशको र दुःखलाई भाग लिन सक्छौं. या बेहतर अझै सम्म, बस तपाईं पछि सबै सामान राख्न र मा कदम. ताजा सुरु गर्न वर्तमान जस्तै कुनै समय छैन!
तारीफ केहि तपाईं आफ्नो प्रोफाइल मा रोचक फेला.
यो व्यक्तिको प्रोफाइल पढ्न महत्त्वपूर्ण जहाँ यो छ. यो तपाईं बारेमा कुरा गर्न कुराहरू दिन्छ. उदाहरणका लागि, तपाईं एक महिला छन् र तपाईं एक मानिस मनपर्ने र उहाँले तपाईं जस्तै बस लैब्राडोर कुकुर छ भने, तपाईं भन्न सक्छ, “त्यहाँ. मेरो नाम मरियम छ र म तपाईं ल्याब छ कि आफ्नो प्रोफाइल मा याद. म पनि के!” त्यहाँ देखि, आफ्नो कुकुर को एक संक्षिप्त विवरण दिन, तपाईं फिर्ता सुनेर आनन्द उठाउन भनेर उल्लेख, र बन्द हस्ताक्षर.
खुलकर यौन टिप्पणी जोगिने.
यौन innuendos संग सुरुमा पनि बलियो मा आएको र व्यक्तिको फोटो टिप्पणी गर्न प्रयास नगर्नुहोस्. अलि धेरै 'गहिरो खोज्नुहोस’ टिप्पणी गर्न, शायद केहि तिनीहरूले आफ्नो विवरण भने.
संचार जारी गर्न एक बाटो पत्ता.
पहिलो इमेल को मुख्य बुँदा तिनीहरूलाई तपाईं सूचना र तपाईं फिर्ता प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न छ. धेरै जानकारी परित्याग नगर्नुहोस्, तर तिनीहरूलाई चासो प्राप्त गर्न पर्याप्त भन्नुहुन्छ. तिमी जा कुराकानी प्राप्त गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसैले प्रश्न सोधेर एक राम्रो विचार छ, लामो समय को रूप तपाईं पनि धेरै सोध्न नहीं.
तपाईं साधारण मा छ कुराहरू उल्लेख, र तिनीहरूलाई बारेमा प्रश्न वा दुई सोध्न.
उदाहरणका लागि, तपाईं पहिलो कसैले संग संदेश सुरु गर्दा, तपाईंले सोध्न सक्छ, “यस हप्ता तपाईं मजा केहि गरे?” “तपाईं सप्ताह लागि कुनै पनि ठूलो योजना छ?” यो तपाईं अरुका कुराको खोजीनिती गर्ने स्पष्ट बिना व्यक्ति अझ बढी सिक्न मदत गर्नेछ. तपाईं एक समय को लागि विशेष कसैसित सञ्चार भएपछि, तपाईं को दुई पूरा सक्छ जब तपाईं समय मा एक खोलन पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईं हेर्न निर्दोष प्रश्नहरू प्रयोग गर्न सक्छन्.
पट्यारलाग्दो मानिन्छ हुन सक्छ कि साना विवरण लामो पत्र जोगिन प्रयास.
कुरा गर्न यो राख्नुहोस्, तर आफ्नो व्यक्तित्व माध्यम ले चमक गरौं प्रयास. त्यसपछि, औंठी को एक राम्रो नियम हो “प्रशंसा र प्रश्नहरू।” व्यक्तिको उपलब्धिहरूको मा एक निष्कपट प्रशंसा, लेखन शैली, वा जीवन लक्ष्य एक धेरै भन्नेछन्.
यहाँ राम्रो को एक जोडी हो, बरफ तोड स्टार्टर विषयहरू:
तपाईं नै क्षेत्र बस्नुहुन्छ भने, क्षेत्र मा टिप्पणी, या केहि यसलाई सम्बन्धी. यदि तपाईं नै इलाकामा बस्नुहुन्छ छैन, उनीहरूले जहाँ बारेमा प्रश्नहरू सोध्न सक्छौं.
संगीत र चलचित्र पनि राम्रो कुराकानी-स्टार्टर छन्; सबैभन्दा सबैलाई संगीत वा चलचित्र कुनै किसिमको रुचि.
शायद तिमी अझै नै कलेज वा राम्रो गए, एक प्रतिद्वन्द्वी विद्यालय. प्रतिद्वन्द्वी विद्यालय मा poking मजा सधैं बरफ तोड्न रमाइलो तरिका छ.
र आफ्नो वास्तविक नाम साइन इन…
तपाईं यो ठीक काम भने, व्यक्ति तपाईं फिर्ता सम्पर्क गर्नेछ. सम्झना, पनि यदि तपाईं जवाफ प्राप्त, तपाईं आफ्नो चासो राख्न हुनेछ. कि पालना इमेल मा, प्रश्न सोध्नुहोस् र बधाई राख्न (बाँकी इमानदार र सकारात्मक जबकि). जब तपाईं आराम महसुस, तत्काल संदेश जस्तै सञ्चार बढी घनिष्ठ प्रकारका मा उत्प्रेरित गर्न सक्छ, टेलिफोन, र अन्ततः, व्यक्ति मा बैठक.
एक दिन जान्छ र तपाईं तिनीहरूलाई सुनेको छैन भने, भन्दा संदेश संग व्यक्तिको मेलबक्स inundate, एउटा छोटो छोड्न, जवाफ तिनलाई प्रोत्साहित गर्न एक सानो सङ्केत दिन्छ कि गुलियो सन्देश.
आफ्नो पूरा नाम बाहिर दिन नगर्नुहोस्, व्यक्तिगत इमेल ठेगाना, यो प्रारम्भिक इमेल मा फोन नम्बर वा; तपाईं दुवै रुचि राख्नु हुन्छ सम्म प्रतीक्षा र यो कहीं जा गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट छ.